किन समस्या आयो फेसबुकमा ? यस्ता छन् कारण |
किन समस्या आयो फेसबुकमा ? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं-बुधबार साँझदेखि सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या आएको छ। केही प्रयोगकर्ताका फेसबुक र इन्स्टाग्राम पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। अरू केहीका खुले पनि राम्ररी चलेका छैनन्।
अमेरिका, ब्राजिल, पेरू, कोलम्बिया, मेक्सिको जस्ता देशका प्रयोगकर्ताले बुधबार आफूहरूले यी दुई सामाजिक सञ्जाल चलाउन नसकेको बताएका छन्। एसियाली मुलुकमा पनि धेरै प्रयोगकर्ताले चलाउन पाइरहेका छैनन्। सबभन्दा बढी समस्या इंल्यान्डमा देखिएको मिरर डट युकेले जनाएको छ।
एक जना प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘फेसबुक र इन्स्टाग्राम बन्द भए, यसले मान्छेहरूलाई तुरून्तै याद दिलायो कि ट्वीटर पनि छ। यो भनेको आफूलाई मनपर्ने वाइन सकिए जस्तो भयो, अनि फ्रिजबाट बियर झिकेर खाए जस्तो भयो।’ अर्काले लेखेका छन्, ‘फेसबुक बन्द भए जस्तो छ। मान्छेहरू अब साँच्चै मान्छेसँग कुराकानी गर्न जान थालेका छन्।’
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा आएकवो यो समस्याबारे कम्पनीका प्रवक्ताले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अहिले देखिएको समस्या संसारभर नै हो। हाम्रा इञ्जिनियरहरू यसमा काम गरिरहेका छन्। समस्याबारे थाहा हुनासाथ हामी जानकारी गराउनेछौं।’ गत डिसेम्बरमा पनि फेसबुक बन्द भएको थियो। त्योबेला धेरैले फेसबुक ह्याक भएको अनुमान गरेका थिए।
कुमार कट्टेल ‘जिग्रि”को नाममा नक्कली आईडी बनाएर चरित्र हत्याको प्रयास
एउटा अण्डाको किर्तिमानी रेकर्ड